Aroos Soomaali oo 5 qof oo keli ah uga qeybgaleen Coronavirus dartiis | Xaysimo
Home War Aroos Soomaali oo 5 qof oo keli ah uga qeybgaleen Coronavirus dartiis
Aroos Soomaali oo 5 qof oo keli ah uga qeybgaleen Coronavirus dartiis
“Shan qof ayay noqotay inaan aroos ku dhiganno guriga dhexdiisa,, shantii qof waxay noqotay aniga, xaajigeyga, labadii Manxiis iyo waliba qofkii muqaalka noo duubayay,”ayay tiri Sucaad oo BBC u warantay.
Sucaad ayaa intaa ku dartay in arooskooda ay qorsheeyeen bishii January ee sanadkan islamarkana ay go’aansadeen in arooskooda uusan baaqan, iyada oo ay jirto caqabadan ka timi cudurka Corona.
“Sidii loo dhigan jiray ayaan u dhiganay inkastoo uu qarash noo baaqday,” ayay tiri.
“Qaabka waxaa uu ahaa, casho sharaf ayaan sameysanay,shanteena qof ayaana ka qeyb galnay oo qof lixaad xitaa ma jirin, shanteena qof ayaa sidii uu aroos u dhici jiray u dhiganay,”ayay tiri Sucaad.
“Suudkii ayuu xirtay xaajigeyga anigana waxaan xirta Taashkeyga, labo manxiis ayaan soo kaxeysanay, manxiis dhankiisa ka socda iyo manxisad dhankeyga ka socota, waxaan shidanay sameecadihii iyo wixii oo dhan,” ayay tiri sucaad.
“Dhinac marka laga fiiriyo arooska wuxuu noqday si yaraha murugo ah oo asxaabtii iyo qoyskii aan uga talagalay kama aysan soo qeyb galin, dhan marka laga eegana qarashkii ayaa ii baaqday,”ayay tiri Sucaad.
“Qarashka hore waxaa la kireynayay Huteel,waxaa imaanayay ilaa 400 oo qof oo ka soo qeyb galeysay marka lacagta aad ayay u badan tahay ilaa 20 kun oo doolar ayaan ugu talagalay,”ayay tiri Sucaad.
“Hadda waxaa naga baxday waxaan dhaneyn 1000 doolar, 20 kun ee doolar ee aan ugu talagalay way ii baaqatay,” ayay tiri.
“Waxaan kula talin lahaa maadaama ay rabaan inay aqal dhistaan oo ay guursadaan,waxaan dhihi lahaa guursada sideyda oo kale oo igu dayda, cudurkaan waqti uu baxayo lama oga,”ayay tiri Sucaad.